7 डिसेम्बर, 1 993को, कोललिन फ्रर्गुसनले लङ्ग आइल्याण्ड कम्युनिस्ट रेलमार्ग लगाए र यात्रुहरूलाई रक्षक पी -8999पिस्तौल पिस्टल संग शूटिंग गर्न थाले। लाङ आइल्याण्ड रेल दुर्घटनाको रूपमा चिनिने घटनाले गर्दा6जना मानिस मारिए र 191 घाइते भएका छन्।
कोलिन फ्रर्गुस जनवरी 14, 1959मा किंग्स्टन, जमैकामा वोन हरमन र मेफर्गुसनको जन्म भएको थियो। वोन हरमन हर्कुलस एजेन्सीहरूको लागि प्रबन्धक निदेशकको रुपमा काम गरिसकेको छ।
उनीहरूलाई अत्यधिक मानिन्छ र जमैकामा सबैभन्दा प्रमुख व्यवसायीहरूको रूपमा मान्यता प्राप्त गरिएको थियो।
कोलिन र तिनका चार जना भाइहरूले धेरै सुअवसर पाएका थिए जुन शहरमा धनको साथ आउँछ जहाँ चरम गरिबी सामान्य हुन्छ। उनले 1 996मा क्यालाबार हाई स्कूलमा भाग लिन थाले, र सबै उपस्थितिबाट, उनी एक असल विद्यार्थी थिए र खेलमा भाग लिन थाले। 1974 मा स्नातकको समयमा उनको ग्रेड औसत उनको कक्षाको शीर्ष तेस्रो स्थानमा रहेको थियो।
1978 मा फ्रर्गुसनको आर्मी जीवनलाई अचानक अचानक आउँथ्यो। तिनको बुबाले घातक कार दुर्घटनामा मारेको थियो र उनको आमा क्यान्सरबाट मृत्यु भएको थियो। आफ्नो आमाबाबुको हानि दुख्ने बित्तिकै फ्रर्गुसनले पारिवारिक भागको हानि पनि सामना गर्नुपरेको थियो। दुवै बायाँ फर्ग्यूसनको हानि धेरै गम्भीर छ।
संयुक्त राज्यमा सार्नुहोस्
23-वर्षीया उमेरमा, फर्गुसनले किंग्स्टन छोड्ने र आगन्तुक वीसामा अमेरिकामा जाने निर्णय गरे। उनी एक नयाँ शुरुवातको आशा गर्दै थिए र पूर्वी तटमा राम्रो काम खोज्नको लागि तत्पर थिए।
तथापि, यो उत्तेजना को लागी निराश हुन को लागी लामो समय लागेन। उनीहरूले भेट्टाउन केवल एकमात्र काम कम भुक्तान र मनुष्य थिए, र उनले नस्लवादी अमेरिकीहरूलाई दोषको रूपमा दोषी ठहरे ।
13 मई, 1986 मा, अमेरिकामा आगमन पछि तीन वर्षपछि तिनले अडिरी वारेनलाई भेट्टाए र विवाह गरे। उनी जमैकन मूलको एक अमेरिकन नागरिक थिए र उनीहरूको पतिको क्षमतालाई सम्बोधन गर्ने केही प्रभावकारी सांस्कृतिक भिन्नताहरू बुझ्न थाले।
उनी धैर्य र बुझ्थे जब उनले आफ्नो नम्रता गुमाए र क्रोधमा गएर उनीहरूलाई आफ्नो बाटोमा उभिएका श्वेत व्यक्तिहरूको तिरस्कार गर्दा नैतिकताको भ्रामक भाव व्यक्त गरे।
विवाहित जोडी पछि लङ्ग आइल्याण्डको घरमा घर फर्किए। उनले दुर्व्यवहारको बारेमा क्रोध जारी राखे र उनीहरूलाई सेतो अमेरिकनहरूले देखाइदिए। सबै पछि, उनी किंग्स्टनको शीर्ष परिवारमा जन्मेका थिए। सरकार र सैन्य चमत्कारहरूले आफ्नो बुबाको अंतिम संस्कारमा भाग लिइन्। तर अमेरिकामा, उनले महसुस गरे कि उनलाई केहि जस्तो व्यवहार गरेन। सेतो मानिसहरू तिरको घृणा गहिरो थियो।
नव विवाहित हुनु भएको कुराकानी जोडेको लागि लामो समयसम्म पुग्यो। वारेनले आफ्नो नयाँ पतिलाई पनि शत्रु र आक्रामक मार्ग भेट्टाए। तिनीहरू नियमित रूपमा एकअर्कासित लडेका थिए र एक पटक भन्दा बढी युद्ध लड्नको लागि पुलिसलाई घर पठाइयो।
1988 सम्म, विवाहमा दुई वर्ष मात्र भयो, वारेनले "बिग्रेको सामाजिक विचार" को कारण बताए। फर्गुसले भावनात्मक रूपमा तलाकबाट कुचल छोड्यो।
उनले एडेमोको सुरक्षा ग्रुपका लागि काम सुरु गर्न अगस्त 18, 1919सम्म नै नैतिक काम गर्दै जब उनी आफैले काममा चोट पुर्याए। उहाँ तिनको टाउको, गर्दन र पछाडि घाइते भएको एउटा स्टूलबाट निस्कनुभयो। घटनाले पनि उनको जागिरको परिणाममा परिणत गर्यो।
उनले न्यूयर्क राज्यका कर्मचारी कर्मचारी क्षतिपूर्ति बोर्डको साथ एक शिकायत दायर गरे, जसले वर्षको एक प्रस्तावमा आउन थाले। उनले आफ्नो निर्णयको लागि पर्खँदा, उनले नासौ सामुदायिक विद्यालयमा भाग लिने निर्णय गरे।
कलेजमा अनुशासनात्मक समस्याहरू
फर्गुसको अकादमिक प्रदर्शन बलियो थियो। उनले डीनको सूची तीन चोटि गरे तर अनुशासनात्मक कारणहरूको लागि एक क्लास छोड्न बाध्य भए। उनको एक शिक्षकले एक शिकायत दावी गरे कि फ्रर्गुस कक्षा मा उनको तिर आक्रामक थियो।
घटनाले उनलाई 1950 को पतनमा गार्डन सिटी, न्यू यर्कको एडेलिफी विश्वविद्यालयमा स्थानान्तरण गर्न र व्यवसायिक प्रशासनमा ठूलो असर पारेको थियो। फर्गुस धेरै ब्लक पावर र व्हाइट को नापसंदको बारेमा धेरै बहिष्कार भयो। जब उनी वरपर वरपर सबैलाई बोलाउन व्यस्त थिएनन्, उनीहरूले हिंसाको लागि कल्याण गर्नेछन् र एकदम क्रान्तिलाई व्हाइट अमेरिकालाई पराजित गर्न एक क्रांति ल्याउनेछ।
एक घटनाको खोजी गरिएको थियो जब फेब्रुसनले एक कक्षामा पढे जहाँ एक शताब्दीले उनीहरूलाई क्लास असाइनमेन्टको बारेमा सोध्यो भने उनीहरूले नस्सन्देही उपत्यकाहरूलाई चिन्ता गरे। अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ कि त्यस्तो कुनै घटना भएको छैन।
अर्को घटनामा, एक संकाय सदस्य दक्षिण अफ्रिकामा उनको यात्राको बारेमा प्रस्तुति दिने थियो, जब फर्गुसनले उनलाई बाधा पारेको थियो, "चिनियाँ दक्षिण अफ्रिकाको क्रांतिको बारेमा कुरा गरिरहनु र सेतो व्यक्तिहरूलाई कसरी छुटकारा दिनुपर्छ।" र "सबैलाई बिरालो मारो!" सँगी विद्यार्थीहरूले उनलाई चुप लाग्ने प्रयासको क्रममा तिनलाई यसो भने, "कालो क्रान्ति तपाईंलाई दिनेछ।"
जुन 1 99 1 मा, घटनाको नतिजाको रूपमा फ्रर्गुस विद्यालयबाट निलम्बन गरिएको थियो। उनको निलम्बन पूरा गरेपछि पुनः अनुकरण गर्न निमन्त्रणा गरिएको थियो, तर तिनी फर्किन सकेनन्।
कानूनको साथ एक ब्रश
फर्गुसन 1 99 1 मा ब्रुकलिनमा सारियो, जहाँ उनी बेरोजगार थिए र फ्लैटबश पथमा एक कोठा भाडामा लिए। समय मा, यो धेरै पश्चिम भारतीय आप्रवासीहरु लाई बाँच्न को लागि एक लोकप्रिय क्षेत्र थियो, र फर्गुसन बीच मा चले गए। तर उनले आफूलाई राखे, छिट्टै आफ्नो छिमेकीलाई केहि भन्न भन्दै।
1 99 1 मा, उनको पूर्व पत्नी वारिन, जसले तलाकबाट फ्रर्गुसनलाई देख्न सकेन, फर्गुसनको विरुद्ध एक शिकायत दावी गरे, दावी गरे कि उनले आफ्नो कारको ट्रंक खुवाए। केही हप्ता पछि, चीजहरू फ्रर्गुस भित्र उबलिरहेका थिए, र उनले ब्रेकआउट बिन्दु नजिक थिए। यो फेब्रुअरी थियो, र उनले मेट्रो गरिरहेका थिए जब एक महिलाले तिनको छेउमा खाली सिटमा बस्न खोज्यो। उनले उनलाई उत्प्रेरित गर्न सोधे, र फ्रर्गुस तिनलाई चिन्ता गर्न थाले र उनको कोहनी थिइन् र पुलिसले हस्तक्षेप नगरेसम्म उनको विरुद्धमा पनी।
उसले जान्थ्यो र बाहिर निकाल्न खोज्यो, "भाइहरू, मलाई मद्दत पुर्याउनुहोस्!" अफ्रिकी अमेरिकनहरूलाई पनि रेलमा थिए। अन्ततः उहाँ पक्राउ गरियो र उत्पीडनसँग आरोप लगाइएको थियो। प्रतिक्रियामा, फ्रर्गुसले पुलिस कम्युनिष्ट र एनएनसी ट्रांजिट प्राधिकरणलाई पत्र लेखे, प्रहरीले उनलाई क्रूर बनाएको थियो र तिनीहरू खराब र नस्लवादी थिए। दावी पछि अनुसन्धान पछि फर्काइएको थियो।
कार्यकर्ता क्षतिपूर्ति दावी बसाईएको छ
यसले आफ्नो कर्मीको मुआवजाको मामलाको लागि तीन वर्ष लागे। उनको Ademco सुरक्षा समूह को विरुद्ध उनको दावा को लागि $ 26,250 देखि सम्मानित गरिएको थियो, त्यो रकम जो असामान्य नहीं पाया। यसो भनिन्छ कि उहाँ अझै पीडाबाट पीडा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अर्को मुक्ति दावी गर्न म्यानटन कानून फर्मसँग कुराकानी गर्न जानु भयो।
उनले अभियुक्त लरेन अलबामसनसँग भेट्टाए, जो पछिले भन्यो कि उनले एक सभा क्लियरलाई बैठकमा सहभागी गरे किनभने उनी फ्रर्गुसनलाई धम्की दिने र असहज हुन सकेन।
जब कानुनी फर्मले यस मामलालाई पराजित गर्यो, फर्गुसनलाई फर्मको नाम भनिन्छ र फर्मका सदस्यहरू लेखे, उनीहरूलाई भेदभावको आरोप लगाउँछन्। एक कलको बेला, उनले कैलिफोर्नियामा गरेको घटनालाई उल्लेख गरे। यसले फर्ममा धेरै चिन्ता गर्यो, बिन्दुमा जहाँ उनीहरूले भित्री-कार्यालयको ढोकाहरू बन्द गर्दै थिए।
फर्गुसले यो मामला पुन: खोल्नका लागि न्यूयर्क राज्यका कर्मचारी क्षतिपूर्ति बोर्ड प्राप्त गर्ने प्रयास गर्यो, तर यो खारेज गरिएको थियो। तथापि, उनको आक्रामकताको कारण सम्भवतः खतरनाक व्यक्तिहरूको सूचीमा फर्गुसन राखिएको थियो।
न्यूयर्क शहरको साथमा फ्रिज, फर्गुसनले अप्रिल 1 993मा क्यालिफोर्नियामा जाने निर्णय गरे।
उहाँले धेरै कामको लागि आवेदन गर्नुभयो तर कहिल्यै पनि काम नगरेको थियो।
त्यही महिना, उनले $ 400 खर्च गरे लङ बीचमा रगर पी -8999पिस्तौलमा । उहाँले दुई अफ्रिकी अमेरिकियों द्वारा भंग गरिसके पछि एक बन्दूक थैली भित्र बन्दूक लगाउनुभयो।
मई 1993 मा, फर्गुसन फिर्ता न्यू यॉर्क शहर तिर गए, उनले एक मित्र को रूप मा बताए, उनले प्रवासिहरु र हिस्पैनिक संग रोजगार को लागि प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्थे। न्यू यर्क फर्किएपछि उनी छिट्टै बिग्रियो। तेस्रो व्यक्तिलाई बोल्दै, उसले ती ठोकाहरूमा रगतको बारेमा जान्छ, "तिनीहरूका प्रमोद शासकहरू र दमनकारीहरू।" उहाँले एक दिन धेरै पटक बौछार गर्नुभयो र लगातार "" सबै कालो मान्छे सबै सेतो मान्छेलाई मार्ने काला "बनाउँथे। फिर्तीमा, फर्गुसनलाई महिनाको अन्त्य सम्म आफ्नो घर खाली गर्न सोधिएको थियो।
7 डिसेम्बरमा, फ्रर्गुसन न्यूयर्क शहरमा पेन्सिल्वेनिया स्टेसनबाट छोडेर5ह्वाङ्ग आइल्याण्ड लङ आइल्याण्ड ट्राभल ट्रेनमा न्यूयॉर्क पुग्यो। उनको गोपाल आफ्नो बन्दूक र गोला बारुदको 160 राउन्ड थियो।
मर्किलन एवेन्यू स्टेशनको नजिकै पुग्दा फ्रर्गुसन खडा भयो र विधिगत रूपमा यात्रुहरूमा फायरिङ सुरु भयो, दाँया र बायाँ तिर, ट्रयाकलाई हरेक आधा सेकेन्डमा खिच्दै, "म तपाईंलाई प्राप्त गर्न जाँदैछु।"
दुई 15-राउन्ड पत्रिकाहरू खाली गर्न पछि, उनले तेस्रो राउन्डलाई पुन: लोड गरे, जब यात्रु माइकल ओन्नाइन, केविन ब्लम र मार्क म्यानेटेले उसलाई टकराए र प्रहरी प्रवेश नगरेसम्म उनीहरूलाई फाइनलमा राखे।
फर्गुसनले सीटमा पनी राखेका थिए, उनले भने, "हे भगवान, मैले के गरे? मैले के गरे? मैले जो केहि हासिल गरेकी छु।"
छवटा यात्रुहरू मर्छन्
एमी फेनिससी, एक 27 साल पुरानो कर्पोरेट इंटीरियर डिजाइनर Mineola बाट।
जेनेरिक गोरकिकी, 51 वर्षीया माइनेलाबाट खाता कार्यकारी।
एमवाई क्युम किम, 27 वर्षीया नयाँ हाइड पार्क निवासी।
मारिया थेरेसा ट्युमिंग मगटोटो, वेस्टबरी को एक 30 वर्षीय वकील।
डेनिस म्याकार्टी, 52 वर्षीय माइनिला र अफिसको क्यारोलिन म्याकार्टीको कार्यालय कार्यालय।
रसिलो नाइटलेसन, रोजलिन हाइट्सको एक 24 वर्षीया कलेज विद्यार्थी।
19जना यात्रु घाइते भएका थिए।
फर्ग्यूसनको जेबमा नोट
जब प्रहरीले फ्रर्गुसलाई खोजी गर्यो तब उनीहरूको जेबमा नोटबुक पेपरको धेरै स्क्रैपहरू, "यसका लागि कारणहरू", "काकेशियनहरू र चाचा टम निग्रेज द्वारा नस्लवाद" जस्ता लेखिएका थुप्रै स्क्रैपहरू फेला पारेका थिए, र उनीहरूले फेब्रुअरी 191 मा पक्राउ गरेकी थिइन्। , "# 1 लाइन मा गंदी कोकेशियान नस्लवादी महिला द्वारा मेरो विरुद्ध गलत आरोप।"
साथै नोटहरू बीचमा एलटी गवर्नर, अटार्नी जनरल, र मैनहट्टन कानुनी फर्मको नाम र टेलिफोन नम्बरहरू थिए जुन फ्रर्गुसनले पहिले धम्की दिएका थिए, जसले उनीहरूलाई "भ्रष्टाचारको 'कालो' अभियुक्तहरूको रूपमा उल्लेख गरे जुन केवल मदत गर्न इन्कार गरेनन्। मैले मेरो कार चोरी गर्न खोजे "।
यो नोटमा सामग्रीको आधारमा देखा पर्यो, कि फ्रर्गुसनले हत्याको सुरुवात गर्न रुचाउँने योजना बनाइयो जबसम्म त्यो न्यूयर्क शहर भन्दा बाहिर रहेको सीमा बाहिरको मेयर डेविड डिनकिन्स र पुलिस आयुक्त रेमंड डब्ल्यू केलीको सम्मान थियो।
फेब्रुअन 8 डिसेम्बर, 1 993मा आरेखित भएको थियो। तिनले धमनीको दौडान चुप लागे र एक अनुरोध प्रवेश गर्न इन्कार गरे। उनीहरूलाई जमानत बिना आयोजित आदेश दिइएको थियो। जब तिनले न्यायाधीशबाट एस्केप गरे, एक रिपोर्टरले उहाँलाई सोध्नुभयो भने उसले ह्वाइटलाई घृणा गर्यो, फर्ग्यूसनले जवाफ दिए, "यो झूट हो।"
जाँच, परीक्षण, र सजावट
परीक्षणको गवाही अनुसार, फर्ग्यूसनले अत्यधिक दौडोबाट धेरै भागहरू भोग्नुपरेको थियो, तर प्रायजसो यो भावनाको वरिपरि केन्द्रित थियो कि सेतो मान्छे उसलाई प्राप्त गर्न बाहिर थिए। केही बिंदुमा, तिनको परोपकारीले उनलाई बदला लिन योजना बनायो।
न्यूयॉर्क शहर महापौर डेविड डिनसिन्सलाई शर्मिन्दा नरोक्ने, फर्गुसन नासाऊ काउन्टीको नेतृत्वमा एक कम्युनिक ट्रेक्टर चयन गरियो। एकपटक ट्रेन नासाउ प्रवेश गरेपछि, फर्गुसले शूटिंग सुरु गर्यो, निर्दिष्ट सेतो व्यक्तिहरूलाई बन्द गर्न र अरूलाई फिसाउन चयन गर्यो। गोली हान्ने उनको छनौटको कारण र जुन कहिल्यै स्पष्ट भएन।
एक विचित्र सर्कस जस्तो परीक्षण पछि फर्ग्यूसन आफैले प्रतिनिधित्व गरे र जुवायो, प्रायः आफैलाई दोहोरिन्छ, उनलाई दोषी पाए र 315 वर्षको जेल सजाय भयो।
लङ आइल्याण्ड रेल दुर्घटना नरसंहार, ए एन्ड ई अमेरिकी न्याय
40 लेखन शीर्षकहरू: वर्णन
येशू बिरामीहरूलाई गल्ती गर्नुहुन्छ (मर्कूस 4: 35-40)
स्टोरी गियर: के तपाईलाई चाहिन्छ र के गर्नु हुनुहुन्न
बुध ज्योतिष मा
अफ्रीकी अमेरिकी पुरुष र अपराधी न्याय प्रणाली
5 तपाईले पढ्नुपर्ने कारणहरू फ्रेडरिक बैकमैनको "एक मानिसलाई ओभर भन्छ"
महिला संघको विरोधमा राष्ट्रिय संघ
जर्मन ट्रीविया: पवनसर र हनोवरको घर
14 टाइटैनिकको बारेमा आश्चर्यजनक तथ्य
Kathina: रोब प्रस्ताव
समर अवकाशको समयमा शिक्षकहरूको लागि शीर्ष 10 चीजहरू
समुद्री क्षेत्रको विश्लेषण के हो?
Parlez-Vous Français मा गल्ती कहाँ छ?
परीक्षण ड्राइव: 2008 फोर्ड मस्तंग जीटी
मध्य पूर्वमा विशाल विशाल कंटेन्टहरू भेटिए?
तपाईंको युल अल्टर माथि सेट गर्दै
पाँच मानसिक कठोर युक्तिहरू
क्यासल गार्डन - अमेरिकाको पहिलो आधिकारिक आप्रवासन केन्द्र
स्नातक पछि सिफारिस
कसरी छाया व्यक्तिको छुटकारा पाउनु हुन्छ?
सबैभन्दा ठूलो डोनाल्ड ट्रम्प स्क्यानल्स (यति Far)
संयुक्त राज्य अमेरिका को डाक सेवा
रीक, Wreak, र Wreck